Stress And Amenorrhoea - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အင်း….”ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ” ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့….
ဒီလ ရာသီလာရမယ့် ရက်က တစ်ပတ်တောင်ကျော်နေပြီ…
ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြတော့….
“သဲဆု… နင်ရည်းစားရတာမှ ၆လမပြည့်သေးဘူး….ဘာမဟုတ်တာတွေလုပ်ထားလဲ” ဆိုပြီးပဲမေးကြတယ်….
အဲ့လိုကိစ္စတွေမရှိပါဘူး” လို့ အမှန်အတိုင်းပြောပြတော့လည်းမယုံ…
သဲဆုသိတာပေါ့….. ယောကျ်ားလေးနဲ့မိနိးကလေး လက်မထပ်ခင် တရင်းတနှီးမနေသင့်ဘူးဆိုတာ….
သဲစုကခုမှတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်….နယ်ကနေ ရန်ကုန်မှာအဆောင်လာနေပြီးကျောင်းတက်ရတာ….. လာမယ့် အပတ်ဆိုပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲကြီးလည်းဖြေရတော့မှာ…
သဲစုမဟုတ်တာမလုပ်သလို သဲစုချစ်သူကလည်း မိကောင်းဖခင်သားသမီးပါ….
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေက ပြောပြတာကိုမယုံ….ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲထင်နေကြတယ်….အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဒီကိစ္စသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထပ်မတိုင်ပင်ဖြစ်တော့ဘူး…..
စာမေးပွဲအတွက်စာတွေကျက်ရလို့ ပင်ပန်းရတဲ့ထဲ ရာသီကလည်းမလာတော့ သားအိမ်ထဲတစ်ခုခုများဖြစ်နေပြီလားလို့ စိတ်ပူရပြန်ရော….
ရန်ကုန်က အမျိုးထဲမယ် အစ်မဝမ်းကွဲဆရာဝန်တစ်ယောက်တော့ရှိတယ်…..
မမကပါ သူငယ်ချင်းတွေထင်သလို ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စတွေထင်ပြီး အိမ်ကိုပြန်တိုင်နေရင်ဒုက္ခ….
ဒါမယ့် မမက ဆရာဝန်ပဲလေနော့….အဲ့လိုမဟုတ်မှန်းမမကတော့ သိမှာပါ…
“ဟယ်…သဲစုပါလား…..လာလာထိုင်…မမလည်း ညီမလေးဆီလာမယ်လာမယ်နဲ့ အလုပ်တွေများနေတယ်နဲ့မလာဖြစ်ဖူး၊ဘယ်လိုလဲ ကျောင်းတက်ရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား…..အဆောင်ရော?”
“ဟုတ်ကဲ့မမ….အဆင်တော့ ပြေပါတယ်…ဒါမယ့် မပြေတာက….”
“သြော်….အဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့…. စိတ်အရမ်းမပူပါနဲ့ သဲစုရယ်…ရာသီရက်ကျော်တယ်/မလာဘူးဆိုတာက ကိုယ်ဝန်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။ အပျိုလေးတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိဆီးမှုအရမ်းများတဲ့အချိန်၊အရမ်းပိန်ပြီးအားနည်းတဲ့အချိန်တွေမှာ လည်း ရာသီရပ်သွားတတ်တယ်။ ခုပဲကြည့်လေ…သဲစုမှာ မိဝေးဖဝေးရန်ကုန်ထိလာကျောင်းတက်ရ၊ တစ်ခါမှအိမ်နဲ့မခွဲဘူးတဲ့သူက တစိမ်းတွေနဲ့အဆောင်နေရတော့ အနည်းနဲ့အများ စိတ်ဖိဆီးမှုများရတဲ့ကြားထဲ……ခုစာမေးပွဲ stress ကပါ ပါလာတော့ ဖြစ်ပြီပေါ့…..လူကလည်း နဂိုတည်းကမှ အစားမစားတော့ ပိန်နေတာ…ခုချိန်မှာ ဘယ်ရာသီက လာနိုင်တော့မတုန်းကလေးမလေးရဲ့ “
“ဟီး…..ဟုတ်ကဲ့…တော်သေးတာပေါ့ မမရယ်… သဲစုက သားအိမ်ထဲတစ်ခုခုဖြစ်နေပီထင်လို့ တွေးကြောက်နေတာ… ဒါနဲ့ ရာသီပြန်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်”
“မမ အားဆေးလေးတွေပေးလိုက်မယ်….ဆေးမှန်မှန်သောက်… အစားသေချာစား…..အိပ်ရေးဝဝအိပ် စာမေးပွဲနီးတော့ စာကျက်တာလည်းကျက်ပေါ့ညီမလေးရယ်…. ကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့ထိတော့ မလုပ်နဲ့…ဟုတ်ပီလား?”
“နောက်ပြီး မမပြောမယ်….. စာမေးပွဲဖြေပြီးလို့ တစ်ပတ်လောက်နားပြီးတဲ့ထိမှ ရာသီမဆင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့ မမကို ပြန်လာပြော…..လိုအပ်ရင်တော့
ခုမှပဲ တစ်ပူအေးသွားတော့တယ်….နောက်တစ်ပူဖြစ်တဲ့ စာမေးပွဲအတွက် စာပြန်ကျက်ရဦးမယ်……………..
လူစုံလို့ သွားမယ်အပြင်….သဲစုတစ်စုံတစ်ခုကို သတိထားလိုက်မိသည်
” ခဏ………ခဏလေးစောင့်ကြဦးနော်… ငါအဆောင်ခဏပြေးလိုက်ဦးမယ်……အမြန်ပြန်လာမယ်”
ဒင်းက လာမယ့်လာတော့လည်း သွားခါနီးလာခါနီးကြီး…..
အဆောင်မှာ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်း အပြေးသွားယူရချေဦးမည်….